Antsafa nifanaovana tamin’i Tzintia Montaño, mpikatroka nomerika amin’ny fiteny Mixtec · Global Voices teny Malagasy
Mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny herinandron'ny 9 ka hatramin'ny 15 Martsa 2020.
Voadika ny 11 Avrily 2020 3:24 GMT
Sarin'i Tzintia Montaño.
Manohy ny fanentanana ao amin'ny tambajotra sosialy amin'ny fanasana ireo mpampiantrano samihafa hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (fahavitrihana ara-pitenenana) izahay amin'ity taona 2020 ity ary hizara ny zava-niainan-dry zareo amin'ny famelomana indray sy amin'ny fampiroboroboana ny tenin-drazany. Ity lahatsoratra iray ity miresaka momba an'i Tzintia Montaño (@kolotzin) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Tzintia Montaño no anarako, avy any Santiago Huajolotitlán aho, any amin'ny faritra Mixtec any Oaxaca, ary avy ao Meksika ihany koa, noho izany, mihevitra ny tenako ho ña'a davi Chilanga [mponina ao an-tanàndehiben'i Meksika] aho.
Nianatra ny Fiteny Klasika tao amin'ny Oniversitem-panjakana Mizakatena ao Meksika (UNAM) aho, ary nanapa-kevitra ny handalina ny fitenim-pianakaviako, da’an davi , na ny Mixtec taty aoriana, fiteny izay ampiasaina hiresahana any amin'ny sisintanin'i Puebla-Oaxaca. Noho izany antony izany no nisoratako anarana hanao Master tamin'ny Fianarana ny Fandalinana ny Amerindiana sy ny Fianarana amin'ny Fiteny Roa ao amin'ny Oniversite Mizakatena ao Queretaro (UAQ), izay nahaliana ahy hianatra ny famelomana ny fiteny sy nifantoka tamin'ny fiarahana niasa tamin'ny vondrom-piarahamonina Mixtec miampita firenena Puebla-New York. izay misy ny fianakaviako.
Nandritra io dingana io no nianarako betsaka momba ny mari-panondroana manokana, ny faritany, ny mari-pamantarana ny tena manokana ary ny fiteny amin'ny sehatra miampita firenena. Taty aoriana dia nanomboka niara-niasa tamin'ny fitenin'ny indizeny sy ny Fampiasana ny Fiteny Natoraly aho, ary nanomboka nanangona arsiva niaraka tamin'ny Vondrom-piarahamonina Elotl.
Araka ny Ivontoerana Nasionaly ho an'ny Fitenin'ny Indizeny (INALI), ahitana karazany 81 ny tu'un savi, amin'ny maha-fiteny midadasika azy, manerana ny fanjakana Oaxaca, Puebla ary Guerreo, ary ao ihany koa ny faritra sasany any Baja California sy Etazonia, noho ny fifindra-monina . Manana ambaratongam-pahavelomana samihafa ny karazany tsirairay avy ​​satria misy ny ankizy mianatra tu'un savi ho fitenindrazan'izy ireo any amin'ireo vondrom-piarahamonina sasany raha ireo ray aman-dreny lehibe ihany kosa no hany mampiasa ilay fiteny any amin'ny toerana hafa. Indrisy anefa fa izany no mitranga amin'ny da'an davi, izay 50 taona ka hatramin'ny 60 taona no tanora indrindra mampiasa ilay fiteny.
Raha vao jerena dia toa hita tsara ao amin'ny aterineto ny tu'un savi, amin'ny ankapobeny, indrindra amin'ny tambajotra sosialy. Na izany aza, rehefa jerentsika ny karazany tsirairay, tsikaritra amin'izany fa vitsy ny loharano ao amin'ny aterineto ahitana ny da’an davi.
Liana amin'ny famahana ireo olana momba ny mari-panondroana sy ny mari-pamantarana ny tena manokana, ny fiteny Mixtec amin'ny sehatra miampita firenena, ny fifindra-monina ary ny fiarovana ny faritany aho ary, farany, ny teknolojian'ny fiteny. Te hizara ireo lohahevitra ireo aho avy amin'ny fomba fijery samihafa ary handinika izany miaraka amin'ireo mpijery @ActLenguas.
RV: Inona no antony nanosika anao havitrika an-tserasera amin'ny fiteninao ? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho an'ny fiteninao ?
Voalohany indrindra aloha, maniry aho fa hisy bebe kokoa ny fitaovam-pampianarana amin'ny fiteny da'an davi. Ny hitomboan'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa ilay fiteny no nofinofiko sy ny fananana sehatra vaovao mety hampiasana izany. Faharoa, tiako hisy fiantraikany amin'ny teknolojian'ny fiteny ny fikatrohana, sy amin'ny famelomana indray ny da’an davi. Tetikasa maharitra ilay izy kanefa nanapa-kevitra ny hanokana ny fotoanako sy ny ezako aho mba hisarihako taranaka vaovao hampiasa ny fiteny da’an davi.